जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका ५८ वर्षीय थापाको मृत्यु
चितवन । कारागार कार्यालय भरतपुरमा शनिबार राति एक कैदीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बारा जिल्लाको कलैया नगरपालिका घर भएका ५८ वर्षीय भरतबहादुर थापा रहेको कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । विस्तृतमा
गोप्य सूचनाका आधारमा आठ हुन्डी काराेबारी पक्राउ
काठमाडाैँमा सरकारी दरभन्दा सस्तो मूल्यमा रेडियोलोजी सेवा सुरू
त्रिशुलीमा २० वर्षदेखि तुईन तान्दै आएका शुक्रबहादुर चेपाङले नयाँ घर पाए
अन्डरग्राउण्ड पार्किङ नबनाए भवन बनाउन नपाइने !
ओएण्डएमका कारण रक्षा मन्त्रालयका १ सय १३ जना कर्मचारी अन्याेलमा
प्रतिष्ठानमा चिकित्सकको लापरवाही, बिरामी भिमीको निधन
पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्ने बढे
दाङ । गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनसँगै जिल्ला अदातल दाङ देउखुरीमा पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै ५७ पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
काठमाण्डौंमा ट्रकको ठक्करले गोरखाका दुईजनाको मृत्यु
काठमाडौँ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका ५ लोलाङ हाइटमा शुक्रबार ट्रकको ठक्करबाट दुई पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । लोलाङ हाइटबाट बालाजुतर्फ
पोखराका अस्पतालमा परिक्षणमा आएका २२ जनामा डेंगूका विरामी भेटिएपछि...
पोखरा । पोखरामा डेंगू संक्रमितको संक्रमण बढेको छ । असोज यता पोखराका विभिन्न अस्तपतालमा २२ जनामा डेंगूको संक्रमण भेटिएको छ । पोखराका गण्डकी
चालक अनुमति प्राप्त गर्न कक्षा ८ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने
हेटौँडा । प्रदेश ३ सरकारले चालक अनुमति प्राप्त गर्न कक्षा ८ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
९० दिनमा एक हजार १७ चेक बाउन्सको उजुरी
काठमाडौं । काठमाडौंमा चेक बाउन्सका घटना अत्याधिक बढेका छन् । पछिल्ला ९० दिनमा महानगरीय प्रहरी परिसरमा चेक बाउन्सका एक हजार १७ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
भारतले अनुदान रकम दिएन
काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ । भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ अर्ब घोषणा गरेको थियो ।
गुरुबाटै बालिका बलात्कृत !
इटहरी । गत बुधबार साँझ इटहरी वडा नम्बर १० की एक बालिका घरनजिकै नृत्य -डान्स- सिक्न गइन् । नृत्य सिक्न अरु साथी पनि भेला भइसकेका थिए । दसैंअघिदेखि नै स्थनीय राज क्ल्बले तिहारका लागि नृत्य सिकाउन थालेको थियो ।